Barrigada, GU, Guam, Guam
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguJong Min
UJong Min yi-Superhost
Indlu yeeNdwendwe yaseGuam Sunset ikwi "Barrigada Heights" eGuam. indawo ekhuselekileyo engenazinkathazo ngokhuseleko. Iqhayisa ngeyona mbono yolwandle kwindawo ehlala kuthethwa ngayo. Ilungele ukuphiliswa kwimvakalelo yokuya kwindawo yokuchithela iiholide yaphesheya. [Asibamkeli abantu baseKhaya kwipati.]
IGuam Sunset Guesthouse ikwi "Barrigada Heights", indawo etyebileyo eGuam.
Inamagumbi angaqhelekanga. Ivakala ngathi luhambo oluya kwiresort yaphesheya, ke ilungele ukuphiliswa, kwaye yindawo entle kakhulu yeziphakamiso okanye iminyhadala.
I-Sunset Guesthouse yethu yindlu enemigangatho emibini evaliweyo enombono wolwandle kwindawo ephezulu "eBarrigada Heights", eyona ndawo idadayo eGuam, imizuzu emi-4 ukuya kwemi-5 ngemoto ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseGuam.
Kwindlu enamagumbi okulala ayi-5 / amagumbi okuhlambela ayi-5 / amagumbi amabini okuhlala,
Kumgangatho wesibini, isibini esitshatileyo sihlala kwigumbi eli-1, igumbi lokuhlala eli-1 kunye negumbi lokuhlambela eli-1.
Amagumbi ama-4 aseleyo/ amagumbi okuhlambela ama-4/ igumbi lokuhlala eli-1/ ikhitshi eli-1/ igumbi lokutyela eli-1/ igumbi lokuhlambela impahla / igumbi eliphezulu lophahla/ umgangatho wokuqala ngasemva kwigadi yangaphandle. esetyenziswa ziindwendwe
Wamkelekile kwiGuam Sunset Guesthouse, ebekwe "eBarrigada Heights", eGuam, indlu yeendwendwe engaqhelekanga edibanisa izitayile zaseSpain nezaseMelika kumoya woMzantsi Pasifiki. Nangona iGuam, isiqithi sommandla wekorale, sikumbindi woMzantsi Pasifiki, igcina imozulu epholileyo neyomileyo unyaka wonke, ngoko inemozulu entle kakhulu kubantu abanezifo ezinokuchatshazelwa yimozulu efumileyo njengesifo samathambo. IGuam Sunset Guesthouse ikwi "Barrigada Heights", indawo etyebileyo eGuam.
Umbuki zindwendwe ngu- Jong Min
Ukuba ulundwendwe olungakhululekanga ukuhlangana nomninimzi rhoqo, nceda usazise kwangaphambili.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Barrigada, GU